Ny filoha lefitry ny Komity iraisam-pirenena olympika (CIO), Yu Zaiqing, hiakatra ny alina iraisam- pirenen’ny Kung Fu Wushu...
Io no nambaran’i José Ramaherison na i Maitre Gao, filoha mpitantana ny federasiona malagasy tetsy amin’ny JIM Andrefan’Ambohijanahary omaly. « Ankoatra azy dia betsaka ireo mpikaroka Wushu, efa voahosotra ho tompondaka eran-tany ho avy any koa. Isan’ireo nomena fanasana ihany koa ireo manam-pahaizana manokana ao amin’ny federasiona iraisam-pirenena », hoy ihany Maitre Gao, izay miara-miasa amin’ny Media Consulting amin’ny fikarakarana.
Napetraka ho fandaharam-potoana amin’izany ny katrok’ady fampisehoana handraisan’ireo mpikatroka iraisam-pirenenna sy ireo avy eto amintsika. Hampiasaina ireo karazana fitaovam-piadiana toy ny sabatra sy hazo. Isan’ireo haiady hanao fampisehoana amin’izany ihany koa ny Taekwondo sy ny Taebo. « Zava-dehibe ny handraisantsika ity hetsika goavana iraisam-pirenena ity. Ahafahana mandrefy tsara ny lentan’ireo mpikatroka malagasy izany », hoy ihany izy.
Aorian’io dia handray ny fampiofanana iraisam-pirenena isika amin’ny 7 jolay ho avy izao. Mpikatroka avy amina firenena 30 mahery no andrasana amin’izany. Amin’ny alalan’io fiofanana io no hahafantarana ny anaran’ireo solontena malagasy hiatrika ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, izay hatao any Torkia, amin’ny oktobra ho avy izao.